မျှဝေရန်စာငတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ငါတို့ပြင်ဆင်ထားတယ် ငေါ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူစာရင်းပြုစုပါ သင်၏မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်များ၊ WhatsApp သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလူအများကသင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုမည့်မူလနှင့်အသိဉာဏ်ရှိသည့်ထိတွေ့မှုကိုသုံးရန်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
sarcasm ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ
Sarcasm သည်လူကိုလှောင်ပြောင်ရန်၊ စော်ကားရန်သို့မဟုတ်အရှက်ခွဲရန်ရည်ရွယ်သောရက်စက်သောပုံစံဖြစ်သည် အမြီးအမောက်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်.
သင်သိထားပြီးဖြစ်သောအတိုင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သည့်အခါအမြီးအမောက်တစ်ခုသည်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်မတူကွဲပြားသောတန်ချိန်များကို သုံး၍ စကားစုကိုအထူးပုံစံဖြင့်ပုံဖော်သည်။
သို့သော်အမြီးအမောက်ဖြစ်ရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ၊ ၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးမူလစာပေများတွင်လည်းမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသောဆက်သွယ်ရေးပုံစံပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် sarcasm တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်သွားသည်၊ ငါတို့ကြိုးစားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် sarcasm သို့မဟုတ်ပင်မ၊ အသင်းအဖွဲ့ကိုပင်ညွှန်ကြားနေသူကိုအငြိုးထားရန်ဖြစ်သည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်မှာလူတစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသူတို့၏ယုံကြည်ချက်များ၊ စသည်တို့
သို့သော်အခြေခံအားဖြင့်တိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်နောက်ဆက်တွဲစကားလုံးတစ်မျိုးလည်းရှိသေးသည်၊ သို့သော်ထင်မြင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အစည်းအဝေးတွင်မည်သို့ပြောရမည်နည်း။သူတို့တွေရေအများကြီးသယ်ဆောင်လာတာနဲ့အမျှငါတို့ရေနစ်တော့မယ်ငါတို့ရေဆာတယ်ဆိုတာပြဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ။
ထင်ရှားသည် ရေးသားထားသောအမြီးအမောက်နှင့် sarcasm ဖော်ပြရန်မလွယ်ကူပါထို့ကြောင့်အင်တာနက်ကဲ့သို့သောမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့ကိုသင့်လျော်သောအခြေအနေတွင်ခြုံငုံ။ အရေးကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖတ်ရှုသူများသည်ဤဖော်ပြချက်ပုံစံကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
sarcasm ၏ရည်မှန်းချက်ကိုသင်နားလည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများအားမည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်မဆိုအသုံးပြုရန်အလွန်မူလဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ကြသော sarcastic စာပိုဒ်တိုများဖြင့်စုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းပါမည်။ အဲဒါကိုတကယ်သင့်လျော်မှသာသုံးတာပေါ့။
အကောင်းဆုံး sarcastic စာပိုဒ်တိုများ
မင်းထွက်ခွာတဲ့အခါမင်းကတခြားသူတစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားနေရင်“ ငါမင်းကိုချစ်တယ်” လို့ငါ့ကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။
ဘာကြောင့်လွတ်လပ်မှုအကြောင်းပြောရတာလဲ။ အခြားသူများကိုသင်အမြဲတုပနေလျှင် ...
လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန်းစာများစွာကိုဘုန်းကြီးများကဘာကြောင့်မသင်ပေးခဲ့ကြသနည်း။
နော and နှင့်သူ၏မိသားစုသည်လှေကိုလက်လွတ်မသွားသောကြောင့်အနည်းငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်။
ယခု မှစ၍ သင်ခံရသောအကျိုးကိုသင်တို့အားငါပေးမည်။
ငါတစ်ခုခုဆုံးရှုံးပြီဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် - ထိုအချက်ကို? - ငါမင်းနဲ့အတူနေခဲ့သမျှကာလပတ်လုံး။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတွေးခေါ်သူတစ် ဦး သည်ကမ္ဘာနှင့်အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ဘာလို့ဒီလောက်နောက်ကျနေရတာလဲဟယ်။ - ငါသည်သင်၏မုသာစကားကိုမတည့်သောကြောင့်။
ငါငယ်ငယ်တုန်းကဆိုင်အသစ်တစ်ခုအတွက်ညတိုင်းဆုတောင်းလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီလူကဒီလိုမျိုးအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတစ်ယောက်ကိုခိုးပြီးခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။
မင်းကိုငါ့ကိုလှည့်စားကတည်းကငါကုန်းကိုဆင်းချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတောင်ပံတွေမရှိတော့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမလုပ်ဘူး။
အမေရိကန်များ၏ ၁၀၀ ရာနှုန်းသည် ၉၉% သောလူထုံများဖြစ်သည်။
ထာဝရအကြပ်အတည်း - အိပ်ရာမ ၀ င်၊ အိပ်ရာမှပြန်အိပ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြproblemနာက ၀ မ်းနည်းခြင်းဖြစ်တယ်၊
သူတို့သည်သင်၏ကြီးထွားမှုကိုမြင်လိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှမ။ သတိရပါ
မင်းယောက်ျားတွေကသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့မစဉ်းစားတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာပဲ။
မင်းငါကန်ချင်တဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ နှစ် ဦး စလုံးခြေထောက်နှင့်အတူ။
အချည်းနှီးသောစကားကိုပြောခြင်းထက် သာ၍ ကောင်း၏။
ငါ "အခြား" နဲ့ငါလုပ်နေတာငါအနှောင့်အယှက်မပေးသကဲ့သို့ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာငါ့ရည်းစားနှင့်စကားပြောကြပြီမဟုတ်။
လှုပ်ရှားမှုသည်စကားလုံးများထက် ပိုမို၍ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်မကြာခဏတော့မဟုတ်ပါ။
မှားယွင်းခြင်းကသင်၏မတရားပြုမူဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။
မှတ်ဉာဏ်တွင်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိသည် - ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မေ့လိုသည်ကိုမှတ်မိသည်။
အေရိုးဗစ်စကားလုံးသည်ဂရိစကားလုံးနှစ်လုံးမှဆင်းသက်လာသည် - aero၊ စွမ်းရည်ကိုဆိုလိုသည်၊ bic သည်အလွန်ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သင့်ကိုသင်ဖြစ်ရန်တောင်းဆိုသူသည်သင့်ကို ပို၍ ဆိုးရွားသည့်အကြံဥာဏ်မပေးနိုင်ပါ။
ဘဝဟာ roller coaster လိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာမကြာမီထွက်လာတော့မယ်။
ငါ "မင်းလိုချင်တာအားလုံးကိုပေးပါ" လို့ငါပြောပြီးငါရသမျှအားလုံးကလိမ်ညာမှုပဲ။
မန်ချက်စတာ၊ အင်္ဂလန်မှာနေချင်ပါတယ် မန်ချက်စတာနှင့်သေခြင်းအကြားအကူးအပြောင်းကိုသိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။
လူများစွာသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများထက်အနည်းငယ်မျှသာပိုသည်။
ငါ Woman လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ထဲမှာရေကူးနေပြီးရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်။
သင့်ကိုကူညီရန်သင်ဆရာဝန်တစ် ဦး မလိုအပ်ပါ။
သင်တစ်သန်းလျှင်တစ် ဦး မဖြစ်နိုင်ပါ၊ အကြောင်းမှာသင်သည်ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားလူခုနစ်သန်းနှင့်တူသည်ဟုဆိုလိုသည်။
မကြိုးစားပါနှင့်၊ မနေ့ကမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကငါ့အတွက်အရေးကြီးတယ်၊ ဒီနေ့ငါလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူး။
သင် ၀ တ်ထားသောအရာသည်မင်းကိုမကြည့်ပါ။ - အရာအားလုံးကဘာလဲ - မင်းရဲ့မာန
ငါ့ကျောင်းကိုကျောင်းကဘယ်တော့မှ ၀ င်စွက်မှာမဟုတ်ဘူး။
အချက်အလက်များကို ဦး စွာရယူပါ၊ ပြီးနောက်သင်လိုချင်သည့်ပုံစံကိုဖျက်နိုင်သည်။
သင်၏ပစ်မှတ်ကိုသေချာအောင်သေချာစေရန် ဦး စွာရိုက်ပါ၊ သင်ပစ်မှတ်ထားသမျှကိုခေါ်ပါ။
ညံ့ဖျင်းသော Faulkner ။ အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ခံစားမှုကြီးမြတ်စကားများကနေလာသည်ဟုသင်အမှန်တကယ်ထင်ပါသလား
ညံ့ဖျင်းသောစကြ ၀ ,ာ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သာ၎င်းကိုနေထိုင်သောအသိဉာဏ်ရှိသတ္တဝါများဖြစ်လျှင်။
အခြေအနေကို ဦး စွာဆန်းစစ်ပါ၊ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲပါ။
သင်၏နားသည်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်ကိုသိကောင်းသိပေမည်၊ သို့သော်သင့် ဦး နှောက်သည်အခြားအရာတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေသည်။
multitask ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့် multitasking ကိုရှောင်တာပိုကောင်းတယ်။
မိုက်မဲခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းတို့သည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်သုံးခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မိုက်မဲမှုမရှိပါကအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်
သင်ကိုယ်တိုင်ရယ်မောရန်သင်အခက်တွေ့နေပါကသင့်အတွက်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်သန်းတွင်တစ်ယောက်လျှင်သင်၌လူ ဦး ရေခြောက်သန်းရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သတင်းစာကိုမဖတ်ပါကအကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကဖတ်လျှင်၊
အကယ်၍ သင်သည်ပစ်မှတ်ကိုထိချင်လျှင်ရိုက်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်ပစ်မှတ်ကိုပစ်မှတ်ထားပါ။
သင်ငါ့ကိုလက်ထပ်ပါကအခြား orcs များကိုသတိမပြုမိရန်ငါကျိန်ဆိုသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအောက်ခံအပေါ်ထားလေ့ရှိတယ်။ အခုငါအဲဒီအောက်ခံကိုထိပ်ကိုမြှောက်မယ်။ ဒါနဲ့မင်းကိုမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး
အရာနှစ်ခုသာအဆုံးမဲ့၊ စကြ ၀ andာနှင့်လူသား၏မိုက်မဲမှုသာဖြစ်သည်။
သူက Van Gogh ရဲ့ဂီတအတွက်နားရွက်ရှိတယ်။
တစ် ဦး ကသဘောတူညီမှုဆိုသည်မှာလူတိုင်းကမည်သူမျှမယုံကြည်သောအရာများကိုစုပေါင်းပြောဆိုရန်အားလုံးသဘောတူကြသည်။
မင်းရဲ့ fuck ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါလေးစားတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » မျှဝေဖို့ Sarcastic စာပိုဒ်တိုများ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအမည်ကိုမမှတ်မိဘူး။ ကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ပို့ချင်ပါတယ်